Payeng, ilay lehilahy izay namboly ala dia ny azy - Afrikhepri Fondation
Thenanomboka 30 taona lasa izay ny tantara tao amin'ny Nosy Majuli, India. Ny habakabaka fasika mitsingevana eny amoron'ny renirano dia iharan'ny tondra-drano matetika, izay mety hiteraka fatiantoka ao anatin'ny am-polony taona vitsivitsy. Payeng izay mipetraka any miaraka amin'ny fianakaviany dia nanana ny fahatairan'ny fiainany, rehefa hitany indray andro tamin'ny 1979 An'arivony tapitrisa tsy manan'aina ny bibilava mandry amin'ny tany: “Maty noho ny hafanana ireo bibilava, tsy nisy hazo hiaro azy ireo. Nipetraka aho ary nitomany ny tenan'izy ireo tsy manana aina. Famonoana olona io. Nampandre ny minisiteran'ny ala aho ary nanontany azy ireo raha afaka hamboly hazo izy ireo. Namaly izy ireo fa tsy hisy hitombo eto ary nilaza tamiko izy ireo mba hanandrana hamboly volotsangana. "
Na dia mety nilavo lefona aza ny ankamaroantsika, dia nalain'i Payeng ny fonon-tanantsika. Ilay tovolahy, izay vao 16 taona monja, dia tena nandray ilay asa izay ho lasa asa mandritra ny androm-piainany.
Nanomboka izy Mamboly bamboo tsirairay. Taorian'ny taona vitsivitsy niasana irery dia nanjary ala volotsangana kely ny fasika. Tsy nijanona teo i Payeng. " Ka nanapa-kevitra ny hamboly hazo tena izy aho. Noraisiko izy ireo ary namboleko. Izaho koa dia nitondra vitsika mena avy tao amin'ny tanànako: ny vitsika mena dia manova ny fananan'ny tany. Voatsindrona imbetsaka aho ”.
Payeng Arch, fialofana ho an'ny zava-maniry sy ny biby
Tamin'izay i Payeng mamorona tontolo voajanahary tena izy: Nanomboka nitombo ny zavamaniry hafa, tonga ny vorona mpifindra monina ary koa ny karazana tandindonin-doza toa ny rhinoceros na ny tigra Bengal, nahasarika ny omby tonga maro be.
Ny tena mahavariana dia ity oasis ity mbola tsy fantatra tamin'ny manam-pahefana nandritra ny taona 30. Nahazo rivotra amin'ity toerana ity ny ministeran'ny ala tamin'ny taona 2008, rehefa a andiany elefanta zato nahita fialofana tao rehefa avy nandrava tanàna teny amin'ny lalany sy ny tranoben'i Payeng.
“Gaga izahay fa nahita ala matevina toy izany teo amoron'ny fasika. Ireo olona izay noravan'ny pachyderms dia naniry ny hikapa ity hazo ity, saingy nilaza tamin'izy ireo i Payeng fa tokony hovonoina aloha izy ireo. Mitsabo ny hazo sy ny biby toy ny zanany izy. Rehefa nahita an'izany izahay dia nanapa-kevitra ny handray anjara amin'ilay tetikasa. Mahagaga i Payeng. Telopolo taona izay izy no tao. Any amin'ny firenena hafa dia ho mahery fo izy. "
Mendri-piderana ity tantaran'ny lehilahy iray mahavita manova an'izao tontolo izao tsy mampino ity.
Mijery an'i Michael Jackson - Ity dia (2009)
Ny lalàna 48 amin'ny herin'ny hery - Robert Green (Audio)
iYá Africa, fanavaozana Afropolitan amin'ny siansa po
Lahateny nataon'i Martin Luther King "Manonofy aho"